10 Qalabka Photoshop waa inaad isku daydaa (II) | Abuurista khadka tooska ah
Noocyada badan ee Photoshop-ka iyo shaqooyinkooda waxay na siinayaan kala duwanaansho aan caadi aheyn oo ay tahay inaynaan dhayalsan. Laga soo bilaabo dhimista saxda ah ilaa saameynta gaarka ah, ballaarinta, nadiifinta iyo shaandhaynta ... Qeybtan labaad waxaan ku soo jeedinayaa shan qaybood oo kale oo calaamadeyn kara ka hor iyo ka dib shaqadaada iyo tan ugu wanaagsan ... Waqti aad u yar gudahood!
Afuufa: Qoraaladii hore waxaan ku aragnay qaababkii uu Photoshop noogu yaboohay inaanu kordhino cabirka sawiradeena adigoon tayada ka lumin ama aan jajab ka dhigin (asal ahaan dib u qaabeynta is dhexgalka). Laakiin dhab ahaantii la shaqeynta Blow Up waxay na siinaysaa farqi weyn taas oo natiijada ka dhigaysa mid aad u fiiqan oo aan lahayn nooc kasta oo farshaxanno xisaabeed ah. Waxay leedahay maktabad ballaaran oo cabbirro u janjeera feylasha loogu talagalay in la daabaco oo sifiican ugu habboon aaladda shaqada. Nooca tijaabada halkan (www.alienskin.com/bloup/).
Qaylo-dhaan: Qalabkan waxaad awoodi doontaa inaad baabi'iso dhawaaqa ka soo baxa sawirradaada oo leh nidaam waxqabad sare leh oo si gaar ah loogu talagalay in looga shaqeeyo sawirrada dhijitaalka ah iyo sawirrada la marsiiyey. Qalabkani wuxuu leeyahay algorithm shaandheyn casri ah oo awood leh. Waxay sidoo kale adeegsaneysaa awoodda muuqaalka dhawaaqa la-qabsiga iyo fiiqitaanka iyadoo la ilaalinayo faahfaahinta sawirada asalka ah. Nooca tijaabada ah ayaa ah halkan laga heli karaa bilaash. (www.imagenomic.com/nw.aspx).
Koofiyadaha CSS: Gaar ahaan waxtar u leh kuweenna u heellan naqshadeynta websaydhka. Qalabkan waxaad si fudud ugu beddeli kartaa sawirradaada luqadda CSS si dhakhso leh oo sax ah si aad ugu awooddo inaad si toos ah nuqulada ugu samayso tifaftirahaaga HTML. Qaabku waa mid aad u fudud, waxaan la tashan doonaa beddelka CSS ee lakab kasta oo isla markiiba waan isticmaali karnaa. Waxaad ka heli doontaa nooca tijaabada ah ee xiriirkan (www.ateneupopular.com/software/css-hat-from-photoshop-to-css/).
Jabka: Qalabkaan cajiibka ah (oo aan soo sheegnay waqti ka waqti) ayaa dib u cusbooneysiiyay nuqulkiisa oo haddii aadan wali aqoon, waa inaad ogaataa in mahadsanidiisa aad abuuri karto halabuurro leh saameyn aad u xiiso badan. Waxay ku saleysan tahay soo saarista jajabka jajabka waxayna na siin doontaa jilitaanno aad u wanaagsan oo ah nalalka qalaad iyo xitaa sawir gacmeedyo qalin-dhab ah. Nooca cusubi wuxuu u muuqdaa mid tayo sare leh jajabka, horusocod la cabbiri karo marwalba iyo suurtagalnimada in lagu shaqeeyo 16 qaybood kanaal gargaar. Halkan ku tijaabi (www.redfieldplugins.com/filterFractalius.htm).
3D Soojiidiyaha: Miyaad jeceshahay inaad ka shaqeyso halabuurrada saddexda geesood leh adigoon u baahnayn barnaamijyo ka baxsan Adobe Photoshop 3D Invigorator wuxuu halyeey ka noqday filimka iyo warshadaha fiidiyowga ee ka shaqeynta sawirro qaraar sare leh waqtigeeda keydinta astaamaha aaladda shaqada. Hadda noocyadeeda kala duwan ee loogu talagalay Adobe Photoshop, waxay sare u qaaday waxqabadka heer aan caadi ahayn waxayna noo oggolaan doontaa inaan abuurno astaamo 3D, walxo iyo muuqaallo aan caadi ahayn. Waxaad awoodi doontaa inaad marin ka hesho halkan bilaash ah (www.digitalanarchy.com/3Dinvig/main.html).
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » 10 Photoshop plugins waa inaad isku daydaa (II)
Xidhiidhyadu waxtar ma leh, waxay leedahay MA HELO
Guddi-hoosaadka 'Tych Panel' waa sii dheereyn Photoshop ah si loo abuuro diptoobyo, taraafiko iyo isku-darka sawirro dheeri ah si fudud oo dareen leh. Iyo waxa ugu fiican waa inay gebi ahaanba bilaash tahay. Maskaxda ku hay in qalabkan, oo ah kordhin, lagu rakibay qaab ka duwan sidaa darteed raac tilmaamaha rakibidda talaabo talaabo ah, ama ku samee adoo adeegsanaya Adobe Extension Manager si aad u fududeyso hawsha.
Ku jawaab rebeccawintersesqcom
Sida WordPress, WP-CLI waa barnaamij bilaash ah. Si aad u isticmaasho, waa inaad marka hore ku rakibtaa server-kaaga fog ama mashiinka maxalliga ah. Halkaas, waxaad ku ridi kartaa awoodda qadka amarka inuu uga shaqeeyo goobtaada.